Koety: Lalao An-dahatsary, Gazety sy Bilaogera Vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2017 9:52 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra efa nivoaka tamin'ny volana Jiona 2008 ity adika eto ity)
Iza no tokony mandrindra ny sehatra lalao an-dahatsary ao Koety? Izany sy fanontaniana maro hafa no ao an-tsain'ireo bilaogera Koesiana tamin'ity indray mitoraka ity. Miresaka momba ny lalàna mifehy ny lalao an-dahatsary sy izay heveriny fa tokony mandrindra azy ireo i Forzaq8. Hoy izy nanoratra:
Tsy tokony hitsabaka amin'ny lalao an-dahatsary ny politika, tezitra aho ary narary raha nandre fa mila lalàna mifehy izay lalao afaka vidianay na tsia ny olona.
Tsy mila lalàna mitaky amin'ireo mpaninjara mba hanamarina ny mombamomba ireo ankizy miezaka mividy lalao aho.
Mino aho fa tokony handray andraikitra ny ray aman-dreny, fa tsy ny governemanta, tsy fahafahana izany, fa andraikitra
Bilaogera hafa, Ajel nitodika tany amin'ny gazety ao Koety. Hoy izy
Hatramin'izao, manana gazety mpivoaka isan'andro miisa 14 isika eto Koety, ary maro hafa no hivoaka tsy ho ela. Misy ihany koa ireo vohikalam-baovao sy bilaogy mitati-baovao izay tsy mety alefan'ny haino aman-jery rehetra, fanampin'izany ny fahitalavitra tsy miankina, izay mitatitra lohahevitra mafana ao an-toerana tsy tahaka ny fahitalavi-panjakana ao Koety, izay matetika tsy mba mitatitra lohahevitra toy izany. Ny lohahevitra anio dia ny ahoana ny fomba famakiana izay hitranga, fa tsy izay efa nitranga ary iza no gazety manana izany tanjona izany amin'ny fitateram-baovao politika.
SpiKeY nanoratra izay heveriny fa famaritana sahaza ho an'ny bilaogera vehivavy Koesiana. Nanamarika izy hoe:
Ry vehivavy bilaogera …. mihevitra ve ianao fa ny fisokafana amin'izao tontolo izao dia manampy ny mpiserasera aterineto (Koesiana) ahafantatra ny momba anao?
Amin'ny fisokafana … ny tiako hambara hoe… miresaka momba ny zavatra “fady” ianao …. tahaka ny manao izany … tahaka ny mifoka sigara..misotro toaka … mirevy irery …. toy ny manozona….rongony….firaisana ara-nofo…. ny fiarahan'ny vehivavy roa mpifankatia..(FANAMARIHANA: heverina fa fady ao amin'ny fiarahamoninay izany, fa tsy hevitro)…….
Bahsar, ao amin'ny blogallalong, manontany izay tadiavin'ny Minisiteran'ny Fifandraisana. Hoy izy nanoratra:
Ny Minisiteran'ny Fifandraisana (MOC) no fahefana foibe ao Koety mikasika ny aterineto sy ny finday, izay ahitana ireo mpanome tolotra aterineto, antso an-tariby, sy mpandraharaha finday. Andraikitra lehibe toy izany izay afaka mitondra ny firenena amin'ny fomba roa. Ary indrisy, mety hitondra antsika hihemotra ny fomba fisahananan'izy ireo izany. Matahotra aho